Tantaran'i Josefa Mpandrafitra - Wikipedia
Tantaran'i Josefa Mpandrafitra
Ny Tantaran'i Josefa Mpandrafitra dia fanangonan-dahatsoratra momba an'i Maria sy i Josefa ary ny "ankohonana masina", izay mety nosoratana tamin'ny taonjato faha-6 na faha-7, nefa mbola hita tamin'ny dikan-teny kopta sy arabo taty aoriana. Manohana ny foto-pampianaram-pinoana momba ny maha virijiny mandrakizay an'i Maria ilay boky. Isan'ny boky apokrifa kristiana momba ny fiainan'i Jesoa talohan'ny faha-12 taonany ity boky ity.
Miseho amin'ny endrika fanazavana nomen'i Jesoa teo amin'ny Tendrombohitra Oliva momba ny fiainan'i Josefa raikeliny ny lahatsorata. Manohana ny maha virjiny mandrakizay an'i Maria koa izany lahatsoratra izany sady milaza fa nanana zanakalahy efatra (dia i Jodasy sy i Jostosy sy i Jakoba ary i Simona) sy zanakavavy roa (i Asia sy i Lidia) i Josefa tamin'ny fanambadiany voalohany.
Aorian'io fotokevitra ilafihan'ny lahatsoratra io dia mamerina amin'ny fomba hafa izay voalazan'ny Protevanjelin'i Jakoba ny boky ary mijanona rehefa tonga eo amin'ny fahaterahan'i Jesoa. Manambara ilay boky fa voatahy tamin'ny fomba mahagaga hanana saina sy vatana tanora i Josefa ary tamin'ny faha-111 taonany izy no maty. Ireo zanaka lahiny roa voalohany (i Jostosy sy i Simona) dia nanambady ka nanan-janaka. Torak'izany koa ireo zanany vavy roa izay nanambady sy nitokan-trano.
Mibahan-toerana ao amin'ilay asa soratra ny firesahana ny fahafatesan'i Josefa. Nanao vavaka mifono hevi-dalina aloha i Josefa, izay ahitana fitomaniana momba ny fahotany ara-nofo any amin'ny faran'ny boky. Tokony ho ny 50%n'ilay boky no famelarana ny amin'ny fahafatesana, izay ahitana ny anjelin'ny fahafatesana, sy ny arkanjely Mikaela ary ny arkanjely Gabriela, izay niseho taminy. Ny famaranan-teny ao amin'ny boky no anambaràn'i Jesoa fa nitoetra ho virjiny nanandritra ny androm-piainany i Maria sady manao azy hoe "ny reniko, virijiny tsy voaloto".
Milaza ny lahatsoratra hoe: "Ary ny Apostoly masina nitahiry izany resaka nifanaovana izany sady nampandry azy an-tsoratra tao amin'ny trano fitehirizam-bokin'i Jerosalema".
Misy milaza fa io lahatsoratra io dia nosoratana tany Ejipta tamin'ny taonjato faha-5. Roa ny dikan-teny mbola ananana amin'izao dia ny amin'ny fiteny kopta sy ny amin'ny fiteny arabo ka ny dikan-teny kopta no heverina fa nanoratana azy voalohany indrindra. Naorina tamin'izay voalaza ao amin'ny Protevanjelin'i Jakoba ny ampahany be amin'ny lahatsoratra.
Ny Apokalipsa voalohan'i Jakoba, ilay boky apokrifa hita tao amin'ny tahirim-bokin'i Nag Hammadi dia milaza fa niteny amin'i Jakoba i Jesoa hoe: "Tsy amin'ny tsy antony no niantsoako anao, na dia tsy rahalahiko ara-nofo aza ianao". Izany dia tahirin-kevitra fanampiny momba ny fifandraisan'i Maria amin'ireo rahalahin'i Jesoa, ka ahafahana manazava ny maha virijiny mandrakizay an'i Maria.
↑ Bart D. Ehrman, Zlatko Pleše The Apocryphal Gospels: Texts and Translations Oxford University Press, US 2011 p 158, dia ahitana izao soratra izao: "In its present form, the History of Joseph the Carpenter is thus a compilation of various traditions concerning Mary and the "holy family," most likely composed in Byzantine Egypt in the late sixth or early seventh century."
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantaran%27i_Josefa_Mpandrafitra&oldid=877712"
Dernière modification le 10 Oktobra 2018, à 12:29
Voaova farany tamin'ny 10 Oktobra 2018 amin'ny 12:29 ity pejy ity.